၂၀၀၄-၀၅ ချန်ပီယံလိဂ် ပြိုင်ပွဲတုန်းကလို လီဗာပူးလ် စွမ်းဆောင်နိုင်ဦးမလား
(၃)နှစ်အတွင်း ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ် ချန်ပီယံလိဂ်အုပ်စုက လှည့်မပြန်ရအောင် ကြိုးပမ်းရမယ့် လီဗာပူးလ်
29 Nov 2018 . 12:26 PM
လီဗာပူးလ်အသင်းရဲ့ ဒီရာသီ ချန်ပီယံလိဂ်စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ ရလဒ်တွေကတော့ တကယ့်ကို မယုံနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်နေပြီ။ ပြည်တွင်းလိဂ်မှာ ရလဒ်တွေ တောက်လျှောက်ကောင်းနေပြီး ရှုံးပွဲမရှိသေးပေမယ့် ချန်ပီယံလိဂ်မှာတော့ အုပ်စုက ထွက်ရမယ့်အနေအထားနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတယ်။ မသိရင် လီဗာပူးလ် နှစ်သင်းခွဲထားသလိုပါပဲ။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာ PSG အသင်းကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့တာကြောင့် လီဗာပူးလ်အသင်း အုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲဖြစ်တဲ့ နာပိုလီနဲ့ အိမ်ကွင်းပွဲကို မဖြစ်မနေ အနိုင်ကစားရမှာဖြစ်သလို ဂိုးမပေးရဖို့လည်း လိုအပ်နေပါပြီ။
အမှန်အတိုင်းဆိုရင် လီဗာပူးလ်အသင်း ဒီလိုအခြေအနေဖြစ်လာတာက ကိုယ့်ကြမ္မာ ကိုယ်ဖန်တီးတယ်လို့ပဲ ပြောရမယ်။ PSG နဲ့ပွဲမတိုင်ခင် ဇီဗက်ဒါကို မရှုံးခဲ့ဘူးဆိုရင် ဒီလိုအခြေအနေ ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲစဉ်(၅)အပြီး ရပ်တည်မှုအရ နာပိုလီက (၉)မှတ်၊ PSG က (၈)မှတ်၊ လီဗာပူးလ် (၆)မှတ်၊ ဇီဗက်ဒါ (၄)မှတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲမှာ PSG က ဇီဗက်ဒါ ၊ လီဗာပူးလ်နဲ့ နာပိုလီတို့ ဆုံတွေ့ရမယ်။ အဝေးကွင်းဖြစ်ပေမယ့် PSG အတွက် အနိုင်သေချာတဲ့ပွဲလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပြီး (၁၁)မှတ်လို့ သတ်မှတ်ထားပါစို့ရဲ့။
တစ်ဖက်မှာတော့ လီဗာပူးလ်အသင်းက နာပိုလီကို (၁-၀)ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရမယ်ဆိုရင် နောက်တစ်ဆင့်တက်မှာဖြစ်ပေမယ့် (၂-၁)ဂိုးဆိုရင်တော့ အုပ်စုကပဲ လှည့်ပြန်ရမှာပါ။ လီဗာပူးလ်အသင်းဟာ ပထမအကျော့က နာပိုလီကို (၁-၀)ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တာကြောင့် အိမ်ကွင်းမှာ (၁-၀)ဂိုးနဲ့ ပြန်အနိုင်ရမယ်ဆိုရင် (၉)မှတ်ချင်းတူသွားမှာဖြစ်ပေမယ့် သွင်းဂိုးမှာ လီဗာပူးလ်က သာလို့ ရှုံးထွက်အဆင့်ကို တက်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ (၂-၁)ဂိုးဆိုတဲ့ ရလဒ်ထွက်ပေါ်လာရင် အဝေးဂိုးစည်းမျဉ်းအရ လီဗာပူးလ်ပြုတ်မှာပါ။ ယာဂန်ကလော့ပ်က Jurgen Klopp “ကျွန်တော်တို့ အန်ဖီးလ်ကွင်းရဲ့ အရှိန်အ၀ါကို နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်အသုံးချဖို့ လိုအပ်နေပါပြီ။ အန်ဖီးလ်မှာ တိုက်ပွဲဝင်ကြပါစို့” ဆိုပြီး ကြုံးဝါးပြောဆိုခဲ့တယ်။
လီဗာပူးလ်အသင်းဟာ ချန်ပီယံလိဂ်မှာ ရုန်းကန်နေရတယ်ဆိုပေမယ့် ကံကောင်းတာတစ်ခုက (၅)ကြိမ်မြောက် ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၄-၀၅ ရာသီတုန်းကလည်း ဒီလိုအနေထားနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါပဲ။ အဲဒီတုန်းက လီဗာပူးလ်အသင်းဟာ နောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့ အိုလံပီယာကော့စ်နဲ့ အသည်းအသန်ကစားခဲ့ရပြီး အဝေးကွင်းမှာ (၁-၀)ဂိုးနဲ့ ရှုံး၊ အိမ်ကွင်းမှာ (၃-၁)ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရခဲ့လို့ ရှုံးထွက်(၁၆)သင်းအဆင့် တက်နိုင်ခဲ့တယ်။ လီဗာပူးလ်အသင်းဟာ အုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲအဖြစ် အိုလံပီယာကော့စ်ကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး အဲဒီတုန်းက Dynamic Kick နဲ့ ဂိုးသွင်းခဲ့တဲ့ ဂန္ထ၀င်ကစားသမား စတီဗင်ဂျရတ် Steven Gerrard ရဲ့ သွင်းဂိုးကိုလည်း လီဗာပူးလ်ပရိသတ်တွေ အမှတ်ရနေဦးမှာပါ။ အခုလည်း ၂၀၀၄-၀၅ ရာသီတုန်းကလို လီဗာပူးလ် စွမ်းဆောင်နိုင်မလား၊ ဒါမှမဟုတ် ၂၀၁၅ နောက်ပိုင်း (၃)နှစ်အတွင်း ဒုတိယအကြိမ်မြောက်အဖြစ် အုပ်စုအဆင့်ကပဲ စောစောစီးစီးလှည့်ပြန်ရမလားဆိုတာကတော့ . . .
Photo:Evening Standard,Goal,The Anfield Wrap,This Is Anfield
(၃)နှဈအတှငျး ဒုတိယအကွိမျအဖွဈ ခနျြပီယံလိဂျအုပျစုက လှညျ့မပွနျရအောငျ ကွိုးပမျးရမယျ့ လီဗာပူးလျ
လီဗာပူးလျအသငျးရဲ့ ဒီရာသီ ခနျြပီယံလိဂျစှမျးဆောငျရညျနဲ့ ရလဒျတှကေတော့ တကယျ့ကို မယုံနိုငျလောကျအောငျဖွဈနပွေီ။ ပွညျတှငျးလိဂျမှာ ရလဒျတှေ တောကျလြှောကျကောငျးနပွေီး ရှုံးပှဲမရှိသေးပမေယျ့ ခနျြပီယံလိဂျမှာတော့ အုပျစုက ထှကျရမယျ့အနအေထားနဲ့ ရငျဆိုငျနရေတယျ။ မသိရငျ လီဗာပူးလျ နှဈသငျးခှဲထားသလိုပါပဲ။
ဗုဒ်ဓဟူးနကေ့ ကစားခဲ့တဲ့ပှဲမှာ PSG အသငျးကို ရှုံးနိမျ့ခဲ့တာကွောငျ့ လီဗာပူးလျအသငျး အုပျစုနောကျဆုံးပှဲဖွဈတဲ့ နာပိုလီနဲ့ အိမျကှငျးပှဲကို မဖွဈမနေ အနိုငျကစားရမှာဖွဈသလို ဂိုးမပေးရဖို့လညျး လိုအပျနပေါပွီ။
အမှနျအတိုငျးဆိုရငျ လီဗာပူးလျအသငျး ဒီလိုအခွအေနဖွေဈလာတာက ကိုယျ့ကွမ်မာ ကိုယျဖနျတီးတယျလို့ပဲ ပွောရမယျ။ PSG နဲ့ပှဲမတိုငျခငျ ဇီဗကျဒါကို မရှုံးခဲ့ဘူးဆိုရငျ ဒီလိုအခွအေနေ ဖွဈလာမှာမဟုတျဘူး။ ခနျြပီယံလိဂျပှဲစဉျ(၅)အပွီး ရပျတညျမှုအရ နာပိုလီက (၉)မှတျ၊ PSG က (၈)မှတျ၊ လီဗာပူးလျ (၆)မှတျ၊ ဇီဗကျဒါ (၄)မှတျဖွဈပါတယျ။ အုပျစုနောကျဆုံးပှဲမှာ PSG က ဇီဗကျဒါ ၊ လီဗာပူးလျနဲ့ နာပိုလီတို့ ဆုံတှရေ့မယျ။ အဝေးကှငျးဖွဈပမေယျ့ PSG အတှကျ အနိုငျသခြောတဲ့ပှဲလို့ဆိုရမှာဖွဈပွီး (၁၁)မှတျလို့ သတျမှတျထားပါစို့ရဲ့။
တဈဖကျမှာတော့ လီဗာပူးလျအသငျးက နာပိုလီကို (၁-ဝ)ဂိုးနဲ့ အနိုငျရမယျဆိုရငျ နောကျတဈဆငျ့တကျမှာဖွဈပမေယျ့ (၂-၁)ဂိုးဆိုရငျတော့ အုပျစုကပဲ လှညျ့ပွနျရမှာပါ။ လီဗာပူးလျအသငျးဟာ ပထမအကြော့က နာပိုလီကို (၁-ဝ)ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမျ့ခဲ့တာကွောငျ့ အိမျကှငျးမှာ (၁-ဝ)ဂိုးနဲ့ ပွနျအနိုငျရမယျဆိုရငျ (၉)မှတျခငျြးတူသှားမှာဖွဈပမေယျ့ သှငျးဂိုးမှာ လီဗာပူးလျက သာလို့ ရှုံးထှကျအဆငျ့ကို တကျရောကျနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ (၂-၁)ဂိုးဆိုတဲ့ ရလဒျထှကျပျေါလာရငျ အဝေးဂိုးစညျးမဉျြးအရ လီဗာပူးလျပွုတျမှာပါ။ ယာဂနျကလော့ပျက Jurgen Klopp “ကြှနျတျောတို့ အနျဖီးလျကှငျးရဲ့ အရှိနျအဝါကို နောကျထပျတဈကွိမျအသုံးခဖြို့ လိုအပျနပေါပွီ။ အနျဖီးလျမှာ တိုကျပှဲဝငျကွပါစို့” ဆိုပွီး ကွုံးဝါးပွောဆိုခဲ့တယျ။
လီဗာပူးလျအသငျးဟာ ခနျြပီယံလိဂျမှာ ရုနျးကနျနရေတယျဆိုပမေယျ့ ကံကောငျးတာတဈခုက (၅)ကွိမျမွောကျ ခနျြပီယံဖွဈခဲ့တဲ့ ၂၀၀၄-၀၅ ရာသီတုနျးကလညျး ဒီလိုအနထေားနဲ့ ရငျဆိုငျခဲ့ရတာပါပဲ။ အဲဒီတုနျးက လီဗာပူးလျအသငျးဟာ နောကျတဈဆငျ့တကျဖို့ အိုလံပီယာကော့ဈနဲ့ အသညျးအသနျကစားခဲ့ရပွီး အဝေးကှငျးမှာ (၁-ဝ)ဂိုးနဲ့ ရှုံး၊ အိမျကှငျးမှာ (၃-၁)ဂိုးနဲ့ အနိုငျရခဲ့လို့ ရှုံးထှကျ(၁၆)သငျးအဆငျ့ တကျနိုငျခဲ့တယျ။ လီဗာပူးလျအသငျးဟာ အုပျစုနောကျဆုံးပှဲအဖွဈ အိုလံပီယာကော့ဈကို ရငျဆိုငျခဲ့ရတာဖွဈပွီး အဲဒီတုနျးက Dynamic Kick နဲ့ ဂိုးသှငျးခဲ့တဲ့ ဂန်ထဝငျကစားသမား စတီဗငျဂရြတျ Steven Gerrard ရဲ့ သှငျးဂိုးကိုလညျး လီဗာပူးလျပရိသတျတှေ အမှတျရနဦေးမှာပါ။ အခုလညျး ၂၀၀၄-၀၅ ရာသီတုနျးကလို လီဗာပူးလျ စှမျးဆောငျနိုငျမလား၊ ဒါမှမဟုတျ ၂၀၁၅ နောကျပိုငျး (၃)နှဈအတှငျး ဒုတိယအကွိမျမွောကျအဖွဈ အုပျစုအဆငျ့ကပဲ စောစောစီးစီးလှညျ့ပွနျရမလားဆိုတာကတော့ . . .